मानुषी लघुवित्तको प्राथमिक सेयर (आइपिओ) आजबाट खुल्याे
मानुषी लघुवित्तको प्राथमिक सेयर (आइपिओ) आजदेखि खुलेको छ । सो कम्पनीको आइपिओमा साउन ३१ गते आयतबारसम्म आवेदन दिन सकिने छ। अंकित मूल्य १ सयका दरले सर्वसाधारण समूहको कुल ३ लाख ९३ हजार ७५० कित्ता आइपिओ कम्पनीले जारी गरेको छ ।
जसमध्ये कर्मचारी र सामुहिक लगानी कोषका लागि छुट्याएपछि बाँकी रहेको ३ लाख ६८ हजार ५९३ कित्ता सेयर सर्वसाधारणका लागि बाँडफाँड हुने छ । यसमा न्यूनतम १० कित्ता र अधिकतम १ हजार कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन सकिने ।
आर्थिक वर्ष ०७७/७८ सम्म कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी १० रुपैयाँ र प्रतिसेयर नेटवर्थ १३० रुपैयाँ ९५४ पैसा छ । केयर रेटिङ नेपालले कम्पनीको आइपिओलाई बी प्लस रेटिङ प्रदान गरेको छ । अनलाइन प्रणाली मेरो सेयर र आफ्नो बैंक खाता रहेको शाखाबाट आवेदन दिन सकिने ।
जिन्स पाइन्टमा रहेको सानो गोजी किन राखिएको हो धेरैलाई थाहा छैन। हामी त्यसको खासै प्रयोग पनि गरेका हुदैनौ र ओँदैन पनि । त्यो किन राखियो कहिल्लै सोच्दा पनि सोचे नै । मैले पनि कहिद्यदै सोचिन । त्यही हो कहिलेकाही क्वाइन राख्न काम आउँथ्यो है अरु कहिल्लै त्यसको काम आएको छैन । तर त्यो सानो गोजि केटा केटी दुबैले लगाउने पाइन्टमा हुन्छ । केटीहरु के राख्दाहुन त्यो सानो गोजिमा भनेर सोच्थे म पनि । यति सानो गोजी किन पो बनाइएको होला है ।
हामीले कहिल्लै पनि सोचेनौ कहिलेकाही कसैको मनमा त्यसबारे जिज्ञासा आएपनि त्यसको जवाफ खोज्न खासै चासो दिएनौ ? तर। कुनै न कुनै समयमा भने त्यसको बारे कुनै कुैनै प्रशङ्गमा सबैलाई नै जिज्ञसा लागेको हुनै पर्छ । अव भने जान्नेृ कौतुहलता पनि पक्कै लागेको होला रहैन ? आउनुस् यसबारेमा किन हुन्छ त जिन्स पाइन्टमा सानो गोजी ? के को लागि हो त यो सानो गोजी ? यो प्रश्नको उत्तर जिन्स र टेक्सटायल एक्स्पर्टले खोजेका छन।
उनीहरुका अनुसार यसको जवाफ जिन्स बनाउने कम्पनि लेवी स्टार्स जसलाई हामि लिबाइस को नामले चिन्दछौ । सबै भन्दा पहिले जिन्स पाइन्टमा सानो गोजीको सुरुवात यहि कम्पनीले गरेको हो। यो कुनै आम गोजी नभई ‘वाच पकेट’ को नामले चिनिन्छ जुन विशेस गरि काउव्वाईजको लागि भनेर डिजाइन गरिएको थियो। काउव्वाईजले आफ्नो घडी यसमा राख्न मिलोस भनेर यो सानो गोजी बनाइएको थियो। १८ औ शाताब्दीतिर काउव्वाईजआफ्नो वेस्टकोटमा चेनवाला घडी लगाउने गर्दथे। घडी टुट्नबाट बचाउनका लागि लिवाइसले यो सानो गोजी जिन्स पाइन्टमा दिन सुरु गरेको थियो।